Waa maxay Teknolojiyadda lagu baabi'iyay taleefannada casriga ah? | Martech Zone
Waa maxay Teknolojiyada lagu baabi'iyay taleefannada casriga ah?
Waxaan imaaneynaa dhalashada 10aad ee iPhone, oo la bilaabay Juun 29th, 2007.
Sida cilmu-nafsiyeed kasta oo qancin kara, taleefannada casriga ahi waxay awoodaan inay dhigaan wejiga hore ee la jeclaan karo. Iyagu waa saaxiibtinimo, waxtar leh waxayna umuuqdaan inaysan waxyeellayn duqsi. Inta ay yihiin dilaayaasha sadistic ee saacadaha digniinta hurudda ku hurda iyaga oo hubinaya in nidaamkaaga GPS aan dib dambe loo helin. James Pelton
Waxay ku habboon tahay oo keliya in Digniinta Qoraalka Moobaylka ay tan bilaabaan dilaaga infographic: Kiliyaha Taleefanka Gacanta - Qalabka lagu dilo taleefannada gacanta si loogu dabaaldego dhimashadii tiknoolajiyada badan ee la siiyay barxad la yaab leh oo ku jirta calaacasha gacmaheena. Halkan waxaa ah 10 tiknoolajiyadood oo ladilay iyada oo ay ugu wacan tahay casriga casriga ah
Saacadda Qolka - 61% dadka isticmaala taleefannada casriga ah ayaa sheegaya in taleefankoodu beddelay saacaddiisii ​​digniinta.
Watch - Shixnadaha Smartwatch ayaa xaddiday shixnadihii daawashada Switzerland markii ugu horreysay rubuca 4aad ee 2015.
Trackers farsamada - 58% dadka isticmaala taleefannada casriga ahi waxay soo degeen ugu yaraan hal barnaamij oo jimicsi ah.
MP3 Ciyaartoyda - qorshooyin xog raqiis ah iyo adeegyo qulqulka taleefannada casriga ah ayaa la wareegay.
Muuqaalka iyo Sawirka Sawirka - taleefannada casriga ah ayaa lagu tiriyaa in ka badan 50% sawirrada la wadaago tan iyo 2011, isla markaana hoos u dhac weyn ku yimid iibinta kaamirooyinka muraayadaha indhaha oo go'an.
Kaamirada - Kaamirooyinka oo ay weheliyaan, iibinta fiidiyoowga ayaa sidoo kale hoos u sii dhacaya.
GPS iyo Khariidadaha - Dakhliga TomTom wuxuu hoos u dhacay 2 / 3rds 2 sano gudahood, khariidadaha Google-na waxay hadda leeyihiin 1 bilyan oo isticmaaleyaal ah (in kastoo aan doorto Waze).
Telefoonada Landline-ka - 41% guryuhu ma laha taleefan toos ah oo waxaa hadhay 100 telefoon oo lacag bixineed oo ku hartay Hong Kong.
Wargeysyada - Taleefoonnada casriga ah ayaa beddelay wargeysyada sida xulashada agabka akhriska ee ragga ee musqusha ku jira.
Ciyaartoyda - Dakhliyada cayaarta mobiladu waa 3 jeer oo kuwa kumbuyuutarrada gacanta lagu qaato ah.
tooshashka - Adeegsiga taleefannada casriga ah 'app ay jecel yihiin!
Buugga Cinwaanka - Waxaa lagu diley buugaag xiriir oo la jaan qaadaya xiriiradayada iyo dhamaan adeegyadayada internetka.
Ciyaartoyda Fiidiyowga Shakhsi ahaaneed Muusikada oo ay weheliso, taleefanka casriga ahi hadda waa telefishankeenna la qaadan karo. Iyo shirkadaha fiilooyinka ayaa ka jawaabaya, oo leh adeegyo qulqulaya.
Duubista Codka - Xusuusnow dictaphone-ka? Aniga sidoo kale.
calculator - Waad ogtahay inaad u isticmaashay xisaabinta caarad ama laba.
Notepad Ku qor xusuusinta iyo qoraalada.
Sawir Sawir ah - Miyaad aragtay sawirka eeygayga, Gambino? Waxaan u maleynayaa in 100 ka mid ah ay ku jiraan iPhone-kayga.
Weather - Looma baahna inaad warka shidato, Channel-ka Cimilada ayaa laga heli karaa gacantayada gacanta.
Telefoonada Doqon - Doqon ma tihid hadaad isticmaaleysid taleefan flip, waan kuu balan qaadayaa… laakiin waxaad tahay qof aan la xiriirin.
More - Waxaan mustaqbalka ogaan karnaa in shucaaca elektromagnetic-ka (EMR) ee ay soo daayaan mastaafadda mooyee ay sababayaan arrimo dheeri ah oo deegaanka ah… la soco.
Tags: cinwaanka cinwaankaSaacadda qaylo dhaantacalculatorGawaaridakamarad +taleefanka gacantatelefoonada carrab la 'shucaaca elektarooniggaemrtracker jirdhiskatooshciyaartooydaGPSciyaaraha gacantataleefanka gurigalandlinekhariidayntaKhariidadahamp3 ciyaaryahanmusic Playerwargeysyadafarriinlacag bixin taleefankaciyaartoy fiidiyoow shakhsi ahalbum albumtilmaam oo toogashocod duubayaashadaawatocimilada
InMotionNow waxay daahfureysaa socodsiinta qadka tooska ah ee E-mailka Suuqgeynta
Sida loo cabiro loona hagaajiyo Istaraatiijiyadaada Suuqgeynta ee Twitter